Panama : Hilatsaka ho Fidiana Ho Filoha Lefitra Ny Vadin’ny Filoham-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2014 7:49 GMT
Marta no ho filoha lefitritsika manaraka eo. Izy sy Aimée no ho fon'ny governemantantsika. ‘Ndao hiroso ho amin'ny fiovana kokoa miaraka amin'ny ” herin'ny vaovao”
Avoakan'ny antoko eo amin'ny fitondrana, CD (Fiovana Demokratika-Democratic Change), ato amin'ity bitsika ity ireo tsiambaratelo fantatry ny rehetra : Marta de Martinelli, vadin'ny Filoha am-perin'asa Ricardo Martinelli, no hilatsaka ho fidiana ho filoha lefitra.
Nahita ny fiovan'ny fihetsiky ny vadin'ny filoham-pirenena ny tambajotra sosialy, izay nanao kabary mahery vaika kokoa nanomboka tamin'ny tapaky ny 2013 ; toy ny tamin'ny 15 Oktobra 2013 tamin'ny namelezany ny La Prensa tao amin'ny kaonty Twitter-ny, mpampahalala vaovao izay efa fotoana imbetsaka no nahilikiliky ny Filoha Martinelli :
Mijanona ho mibaribary hatrany ny drafitr'asan'i La Prensa tamin'ny nilazany fa tsy ao anaty fandaharan'asan'ny Vatikana ny famangian'i Ricardo Marinelli. Tokony hanamarina mialoha miaraka amin'ny solontenan'ny Ray Masina ry zareo. INONA ARY ITY.
Niteraka karazana fanehoan-kevitra maro ny fanendrena ny Vadin'ny Filoham-pirenena.
Nizara ny sarin'ny Filoha Ricardo Martinelli miseho amin'ny fomba fihogom-badiny izay miparitaka aminà tambajotra sosialy i Juan Carlos Tapia mpanao fanadihadiana ara-panatanjahantena, midika izany fa izy ihany no tena hifaninana ho Filoha lefitra.
Vao avy nandefa tamiko ireo mpifaninan'ny “Democratic Change” ry zareo.
Noforonin'ireo mpiserasera amin'ny Twitter ny tenifototra hoe #noseascongo (#azambaadalaihany), izay ampangain'ireo Panameana maro ho fanarontsaronana ‘fahalaniana indray’ taorian'ny fanendrena ny vadin'ny Filoham-pirenena.
Ampangain'i Delany Morales ” ilay drafitra” izay inoana fa mitondra mankamin'ny “fahalaniana indray” araka ny fahitàny azy.
Raha ohatra ianao ka manohitra io drafitra lozantany nitondra mankamin'ny fahalaniana indray io, RT (avereno bitsihana) !
Ho an'ny sasany, toa an'i Edwin Cabrera mpanao gazety, dia efa naneno ny kiririoka fanairana rehefa hita fa mitady hiverina ny tranga niseho toy ny tany Arzantina niaraka tamin'i Kirchner.
Ny fanamby voalohany hatrehana dia ny fandresen-dahatra fa tsy fiandohan'ny Kirchnerisma Panameana akory ny fandresen'i @JDAriasV sy i @martamartinelli.
Tahaka izay ihany, naneno hevitra i Edilberto Gonzalez mpanoratra :
Eto no ahitàna ny fanarahan'ny Fiovana Demokratika ny fotokevitra Kirchner.
Ho an'i Julieta Guerra anefa dia tsy misy vaovao tsaratsara kokoa noho izany :
Volavolan-kevitra sosialy, fahatsapàna avo ny fiaraha-mientana ny raikipohin'ny filoha ho an'i JDAriasV sy i Marta de Martinelli. ‘Ndao hizotra ho amin'ny FIVOARANA misimisy kokoa !
Tao amin'ny kaonty Facebook-ny i Alvaro Biebarach dia nanaparitaka sary izay nampientanentaa ny namany maro tamin'ny fanendrena ny Vadin'ny Filoham-pirenena :
Hafatra vitsivitsy tao amin'ny Facebook-ko momba ny fanendrena an-dRtoa Marta de Martinelli. Tena tsara…
Mandritra izany fotoana izany dia aparitak'i Francisco Rodrigo ny sarin'ny Andalana faha 193 ao amin'ny Lalàm-panorenana Panameana izay toa mandrara ny Vadin'ny Filoham-pirenena tsy hilatsaka ho filoha lefitra :
Tokony ho vakian'i @rmartinelli ny Andalana 193 ao amin'ny Lalàm-panorenana politika Panameana amin'izao fotoana izao.
Raha ny mikasika io olana io dia nolazain'ny Filohan'ny Fitsarana momba ny Fifidianana, Erasmo Pinilla, fa ny taranaka amin'ny laharana faha-efatra sy ny zafikely no tsy mahazo milatsaka ho fidiana, fa ny tsy voakasik'izany kosa ny vady.
Efa vonona niaraka tamin'io fanendrena io ny sehatra, misy dimy sahady ny mpifaninana ho filoha sy ho filoha lefitra amin'ny 4 May.
Tantaran'ny Panamà farany
30 Marsa 2019Amerika Latina
30 Novambra 2018Amerika Latina